ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရထား Featuring အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, Movies စောင့်ကြည့်ထက်ရထားခရီးစဉ်ကိုယူသငျသညျလာအောင်နှိုးဆွပါလိမ့်မယ်? ရထား Featuring အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့်လိုက်ပါ, မှာကျွန်တော်တို့ကို tweet @saveatrain သငျတို့သသလောက်ကျနော်တို့ပြုသကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုကိုခစျြလြှငျအသငျသညျမွငျသောသူတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုပြောပြ.
ရထားဖြစ်ပါတယ် Featuring, Movies, ငါတို့၏ရွေးများ၏ထိပ်တွင် – ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင် 1 သို့ 8 (2001-2011)
၏ကျော်ကြားစီးရီးအပေါ် အခြေခံ. စာအုပ်များ J.K အားဖြင့်. Rowling, ရထား Featuring ကဤရှစ်ယောက်, Movies ငယ်ရွယ် wizard ကိုအကြောင်းမှော်စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်, ဟယ်ရီပေါ်တာ. သူဟာမှော်အင်အားကြီးပိုင်ဆိုင်နှင့်စုန်းအတတ်နဲ့ wizardry ၏ Hogwarts School တွင်တက်ရောက်သိတော့, သူစိန်ခေါ်မှုများများများနှင့်ပြည့်စုံသစ်တစ်ခုအသက်ရှင်ခြင်းသို့ထိုးမယ့်ဘယ်မှာ, လူကြမ်းအဖြစ်, နှငျ့အောငျမွ.
ဒါပေမယ့်ရထားရှိရာကြွလာတော်မူကြပါ? ကျောင်းဟယ်ရီရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်တွင်, သူ Hogwarts Express ကိုပေါ်ပါတယ်, ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရထား9⅓. ကိုယ်ကသာဖွင့် လက်လှမ်း အပြေးနေဖြင့် – လျင်မြန်စွာ- ပလက်ဖောင်းအကြားအုတ်မြို့ရိုးကိုဦးတည်9နှင့် 10. ရထားတစ်စီးနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သူ Ron Weasley နှင့် Hermione Granger နှင့်တွေ့ဆုံ, သူ၏အသက်တာရှည်မိတ်ဆွေများကဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်တဲ့သူ.
ရုပ်ရှင်အပေါငျးတို့သတစ်လျှောက်လုံး, အဆိုပါ Hogwarts Express ကိုရထားကျောင်းတိုင်းတစ်နှစ်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးသင်္ကေတကိုဆက်လက်နှင့်အချို့တော်တော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်ဇာတ်လမ်း-လိုင်းများများအတွက်ပတ္တူထောက်ပံ့. ဟယ်ရီနဲ့ Ron ရထားလွဲချော်နှင့်ကျောင်းတစ်ခုဝိဇ္ဇာအတတ်အားကားတစ်စီးပျံသန်းခဲ့အထူးသဖြင့်ထိုကာလ!
သင်တို့သည်ဤရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်၏အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ရန်မီးရထား Featuring ကို download လုပ်ပါသေချာအောင်လုပ်ပါ ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို သင်သည်သင်၏လာမည့်စာအုပ်ဆိုင်မတိုင်မီ ရထားခရီး.
အဆိုပါ Darjeeling လီမိတက် (2007)
Sinefil မှမျှဝေသည် (@ city.of.cinema)
ဇာတ်ဆောင်များနှင့်ထိထိမိမိ, ဤအရွေး, ရထား Featuring movies, ယင်း၏စာရေးဆရာဒါရိုက်တာအပေါငျးတို့သထူးခြားချက်ရှိပါတယ်, မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Anderson က. သူတို့ရဲ့အဖေတစ်ဦးမတော်တဆသေခံခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်, ညီအစ်ကိုသုံးယောက်နှောင်ကြိုးတစ်ခုကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရထားအိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီးခရီး.
Owen Wilson ကအားဖြင့်ကစား, Adrien Brody, ဂျေဆန် Schwartzman, တစ်ခုချင်းစီကိုအစ်ကိုစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရပြီး, နှင့်ကောက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးတရပ်ပေါ်ပေါက်လာ. ဒါပေမယ့်သင်တန်း, တစ်ဦးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes Anderson ကရုပ်ရှင်ဖြစ်ခြင်း – အများအပြားဟာသပွေီးမှနှင့်အလှည့်ရှိပါတယ်. ညီအစ်ကိုတစ် ဦး ကသူထွက်သွားသည် ကိုယ်ဝန် အိမ်မှာဇနီးနှင့်အခြားသည်သူ၏ရည်းစားနှင့်ကွဲကွာနေသည် အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုတွေ့ ရထားရဲ့လက်ထောက်တ ဦး နှင့်အတူ.
တစ်ဦးမီးမြွေလည်းရှိပါသည်, အသုဘ, တရားအားထုတ်ရန်နှင့် ... ကောင်းကောင်း, ကျနော်တို့ကပိုဝေးမဆိုပေးမည်မဟုတ်. ဒီအစွန်းရောက်ဂန္သင့်ကိုယ်ပိုင်အမိန့်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ကြပါစို့ ရထားစွန့်စားမှု.
အရှေ့တိုင်း Express ကိုအပေါ်လူသတ်မှု (2017)
စတိဗ်မှမျှဝေတစ် ဦး က post (@grushkov)
နာမည်ကျော် Agatha Christie ကဝတ္ထုပေါ်တွင်အခြေခံ, ဒီခေတ်သစ်ဇာတ်ကား Judy Dench အပါအဝင်ကြယ်-ထားတဲ့သွန်းရှိပါတယ်, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, ဂျော်နီ depp, နှင့် Willem Dafoe. Kenneth Branagh ဟာကျူ Poirot ၏ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်, သူလည်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကဒီရထား Featuring ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
အပြင်နိဒါန်းနှင့်အချို့သော flashbacks ထံမှ, တစ်ခုလုံးကို storyline တစ်ဦးအပေါ်သတ်မှတ် ဇိမ်ခံရထား. Poirot ပျဉ်ပြားအရှေ့တိုင်း Express ကိုတာရှည်ခံထိုက်အားလပ်ရက်ယူ. ပထမတန်းစားဇိမ်ခံဘားနှင့် ညစာစားကားတစ်စီး, သူနှင့်မသက်ဆိုင်သောထင်ရသောခရီးသည်အုပ်စုတစ်စုနှင့်သူတွေ့ဆုံသည်. သူ၏အသက်တာအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး Poirot စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတို့ထဲမှတစ်ဦးမလုပ်ပဲ – တစ်ဦးလေးစားခံရသောစုံထောက် – ဘေးကင်းလုံခြုံသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့.
သူကငြင်းဆန်, နှင့်ခရီးသည်အားလုံးအိပ်ရာဝင်. နောက်တစ်နေ့နံနက်, ခရီးသည်အသတ်ခံတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အမှုအရာထက်ပိုအံ့သြဖွယ်စေရန်, ထဲမှာရထားလွဲသွား မိုးပွင့်. Poirot ရထားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကျောမီပြစ်မှုဖြေရှင်းဖို့စုဆောင်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့လူသတ်မှုသတိထားဖြစ်လာနေသည်.
တစ်ဦးလှလှပပပြောသည်ခုနှစ်တွင်, အံ့သြဖွယ်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ သည်းထိတ်ရင်ဖို, ဇာတ်လမ်း Poirot အင်တာဗျူးအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီခရီးသည်တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါကပုံရသည်အဖြစ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအပေါငျးတို့သလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုနှင့်မဟုတ်ပါဘူးတော်မူကြောင်းကိုအထဲကတွေ့.
ဤသူကားအသူတို့တွင်တစ်ဦး-တွေ့မြင်ရပါမည်, ရထား Featuring movies, အဆိုပါတောက်ပ storyline နဲ့ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားသရုပ်ဆောင်ဘို့မသာပေမယ့်လည်း အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရှုခင်း နှင့်ရထားအလိုလိုအမြင်များ.
ဒါကလို့ Little ကအင်ဂျင် (2011)
သငျသညျအနညျးငယျစွန့်စားရှိပါက ခရီးသွားလာ မင်းနဲ့အတူ, ဒီဆိ-ဖော်ရွေရုပ်ရှင်နှင့်အတူခရီးအဘို့ထိုသူတို့စိတ်လှုပ်ရှားရ. အဆိုပါဂန္သားသမီးရဲ့ပုံပြင်ကြယ်-ထားတဲ့သွန်းနဲ့ Full-အရှည်ရုပ်ရှင်ဘဝမှကြွလာ. featured အနုပညာရှငျမြားနှငျ့ဂျေမီ Lee က Curtis နှင့် Whoopi Goldberg ကပါဝင်သည်.
အဆိုပါရုပ်ရှင် Little ကအင်ဂျင်အောက်ပါအတိုင်း – တစ်ကစားစရာရထား – နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အတွက်သူမ၏ Adventures တစ်လျှောက်လုံး, သူမနဲ့အခြားရထားဇာတ်ကောင်များနှင့်ကလေးကစားစရာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်အဖြစ်. အစစ်အမှန်လောကရှိတစ်ဦးအပြိုင် storyline ရှိပါတယ်, အဆိုပါဇာတ်ကောင်ရစ်ချတ်အနည်းငယ်ကောင်လေးကိုခေါ်သည်အဘယ်မှာရှိ. သို့သျောလညျး, ရစ်ချတ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အတွင်းပိုင်းအထိပြီးဆုံးသည့်အခါဒီကမ္ဘာနှစ်ခုကိုကွဲသွားရင်. အထံတော်ပြဿနာများရှိကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါကြောင့်သူပြန်သွားဖို့လိုတယ်. သူနှင့်ကစားစရာများကသူအားတကယ့်ကမ္ဘာသို့ပြန်ရန်ကြိုးစားစဉ်စွန့်စားခန်းနှင့်ဟီဂျင်များထွက်ပေါ်လာသည်.
ရထားနဲ့သွားဖို့ Movies Featuring Trains ကမှုတ်သွင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ!
ဇာတ်လမ်း related ရထား Featuring သင့်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရေးသားဖို့အဆင်သင့်? အလည်အပတ် www.saveatrain.com နှင့်သင့်နောက်တစ်နေ့မီးရထားစွန့်စားမှုများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေရဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဟယ်ရီပေါ်တာ trainmovies ရထားအကြံပေးချက်များ